Gabdhaha Muslimiinta Sweden oo lagu candhuufo | Somaliska
Weerarada lagu qaadayo gabdhaha Muslimiinta ah ee xijaaban ayaa ku soo kordhaya Sweden, iyadoo qaar badan ay sheegayaan in lagu candhuufo marka ay dariikhyada marayaan. Guud ahaan weerarada ku salaysan naceybka Muslimiinta ayaa soo badanaya sida ay shaacisay hay’ada ka hortaga dambiyada Brottsförebyggande rådet (Brå).
Weerarada ayaa inta badan lagu qaadaa gabdhaha xijaaban maadaama ay yihiin kuwo si fiican uga dhex muuqda bulshada. Xitaa iskuulada ayaa noqday goobo aysan ku amaan galin gabdhaha Muslimiinta ah, iyadoo xitaa mararka qaarkood ay macalimiintu yihiin kuwo dhaliilaya gabdhaha xijaaban.
Xaalada ayaa ah mid sii adkaanaysa iyadoo xitaa gabdhaha qaarkood ay bilaabeen in ay si xoogleh u xirtaan xijaabka, iyagoo ka cabsi qaba in dadka neceb muslimiinta ay isku dayaan in ay qasab uga furaan.